လက်ကား KD-LC-16N ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း ဘူတာရုံ ခရီးဆောင်လက်တွေ့ဘဝတွင် လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက် Cast ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူ |ကြင်နာသောကွန်ရက်
Alibaba တွင် KD-LC-16N ကိုမှာယူရန် နှိပ်ပါ။
ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း။ 3G-SDI×8၊HDBaseT×4၊ HDMI×2၊NDI×6၊ Stream×6
ဗီဒီယိုအထွက် PGM အထွက် HDMIx1၊SDIx1;PVW အထွက် HDMIx1၊SDIx1;စနစ်များ HDMI×1၊NDI×1
ရောသမမွှေပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်- Signal×8၊NDI×6၊SRT×6၊Stream×6၊DDR×2
1. ဗီဒီယိုထည့်သွင်းခြင်း- SDI×8၊ HDMI×2၊ HDBaseT×4၊ NDI×6၊ SRT×6၊ Stream×6၊ အထွက်- SDI×1၊ HDMI×2၊ NDI×1၊ SRT×1;
3. Full HD ရောစပ်ထားသော kernel၊ full HD ဟာ့ဒ်ဝဲအချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော ကူးပြောင်းခြင်းသည် အဝင်အချက်ပြမှုနှင့် NDI၊ SRT၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ စက်တွင်းပစ္စည်း DDR (ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ PPT၊ ပြန်ဖွင့်ခြင်း စသည်) ဖိုင်ကို ကူးပြောင်းခြင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလည်ပတ်ခြင်း ကုဒ်နံပါတ်ကို သိရှိနိုင်သည် DDR ခေတ္တရပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပါ၊ ပလေယာပွိုင့်နှင့် နောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်း၏ ရှေ့နှင့်နောက်ကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ချန်နယ်၊ တွန်းစီးဆင်းမှုနှင့် ဆွဲထုတ်ခြင်းမုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ရာပေါင်းများစွာသော ဟာ့ဒ်ဝဲပြောင်းခြင်း အထူးပြုလုပ်ချက်များ၊
4. အသံထည့်သွင်းခြင်း- စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) IN×5;ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မိုက်ခရိုဖုန်း (48V) XLR IN×5;စတီရီယို (ဘယ်၊ ညာ) OUT×1;ဟန်ချက်ညီသော အထွက်အား XLR OUT×2;SDI မြှုပ်သွင်းထားသော အသံ IN×5၊ HDMI မြှုပ်သွင်းထားသော အသံ×2၊ HDBaseT မြှုပ်သွင်းထားသော အသံ×4၊ပင်မအထွက်စောင့်ကြည့်ရေး 3.5×1;စောင့်ကြည့်မှု 3.5×1 ကစားပါ။MIC 3.5×1;
5. Built-in ဒစ်ဂျစ်တယ် + အန်နာရောနှော ပေါင်းစပ်ထားသော အသံ၊ မြှပ်နှံထားသော အသံနှင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံနှင့် အန်နာလော့အသံ ရောနှောခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ပါ၊ SDI×5၊ HDMI×2၊ HDBaseT×4၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ မြှုပ်နှံထားသော/မထည့်ဘဲ ထည့်သွင်းထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်×5၊ ပေးနိုင်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ ×5၊ analog စတီရီယို×5၊ MAC XLR×5 နှင့် အခြားသော ပြင်ပထည့်သွင်းသည့်အသံ၊ ချိန်ညှိထားသောအသံကို HDMI၊ SDI အထွက်အပေါက်အဖြစ် မြှုပ်နှံထားနိုင်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် စတီရီယိုအထွက်အဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်၊ built-in၊ 48V ဖန်တမ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ စတီရီယို×၁ အထွက်၊ ထုတ်လွှင့်မှုစောင့်ကြည့်ရေး 3.5×1၊ လမ်းညွှန်စကားပြော နားကြပ် 3.5×1၊
Built-in ထုတ်လွှင့်မှုအဆင့် nonlinear တည်းဖြတ်စနစ်;
ယခင်- KD-LC-8N စက်ရုံစျေးနှုန်း အိတ်ဆောင်လက်တွေ့ဘဝတွင် လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ကာစ်တ်စက်ပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: KD-LC-16UHN အရည်အသွေးမြင့် ကိရိယာ အိတ်ဆောင် လက်တွေ့လုပ်ငန်းသုံး ဗီဒီယိုကင်မရာများ တိုက်ရိုက်ကာစ်တ်